FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BOXERMAN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Boxerman
Alika mpihetsiketsika mpiady totohondry / Doberman Pinscher
'Eyeore, Boxer brindle Boxer ary manga Doberman mifangaro dia Boxerman izy.'
Boxerman dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny mpanao ady totohondry ary ny Doberman Pinscher . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Finn the Boxerman toy ny alika kely amin'ny 2 1/2 volana— 'Finn dia avy amin'ny toeram-pialofana Texas Doberman ary izy irery no tao amin'ny fako manana tarehy Doberman. Griffin Giant Woo-Chester Cash ny faha-3 no anarany feno. Tiany ny mihazakazaka sy milalao, miketrika indrindra izy aorian'ny fandroana. Alika anaty trano matetika izy, mivoaka milalao sy manao ny orinasany ary mifehy. Mipetraka miaraka amin'ny alika iray hafa Fryla, karazana mifangaro. Izy koa dia iray amin'ireo alika mahatsikaiky indrindra hitako. '
Finn the Boxerman ho alika kely amin'ny 2 1/2 volana
'Diego dia a Doberman SY mpanao ady totohondry mifangaro. Tena alika mahay izy, ary tsy naharitra ela akory lamasinina trano izy, iray volana angamba mba hahatonga azy hivoaka ivelany foana. Eto amin'ity sary ity dia roa volana sy sasany angamba izy. Tiany ny milalao ary mahafinaritra izy miaraka amin'ny ankizy kely. Nanenjika ny zanak'olo-mpiray tam-po amiko izay telo taona izy ary mba hisambotra azy dia napetrany taminy ny vavany, tsy hanaikitra fotsiny ny vavany hanenjika azy, toy ny nahatratrarako anao! Ny fahazaran-dratsiny dia tiany ny miditra amin'ny zava-drehetra. Sakano ny atin'akanjo sy ba kiraro. Tiany ny mihinana vato. Tena tiany ny manenjika vorona. Alika marani-tsaina izy na izany aza, ao anatin'ny iray volana ahatongavako azy dia hainy ny mihodina, omeo dimy avo aho dia orohany aho. Fa toa an'i Diego aho manoroka ahy ary apetrany amin'ny vavako ny vavany fa tsy milelaka ahy. Fantany rehefa miteny azy aho hitsambikina ary miara-mandihy amiko izy. Azoko entina any ivelany izy fa tsy hitsoaka . Mihaino tsara izy amin'ny ampahany betsaka. Nasaiko niditra tao anaty fiara izy dia niditra tao anaty fiara izy, nasaiko niditra tao aoriana izy dia lasa. '
'Ity no zanako malalako Liberty amin'ny 8 herinandro. Izy dia Boxerman Pinscher. Ny anaran'ny reniny dia Justice dia feno ra ra izy Doberman Pinscher . Rà feno ra ny dadan'i Liberty mpanao ady totohondry . Antsoiko hoe lil 'Boxerman Pinscher aho!'
Liberty the Boxerman Pinscher puppy amin'ny 8 herinandro
Liberty (ankavanana) ny alika kely Boxerman Pinscher amin'ny 5 volana, miaraka amin'ny reniny Doberman Pinscher izay madio, Justice (ankavia)
Lisitry ny alika mifangaro Doberman Pinscher
alika kely pitbull brindle amidy
alika kely 3 herinandro fampandrosoana
amerikana bulldog pit bull mix
mixeta labo mavo basset
Inona no ho ny vilany lehibe kibo kisoa get
fampifangaroana lab mavo